यस्ता छन् आफुले आफुलाई खुसी राख्न गर्नुपर्ने दिनचर्याहरु, जानी राखौ
सेप्टेम्बर 11, 2019 सेप्टेम्बर 11, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments आफु, खुसी
आफुले आफुलाई माया गर्नु भनेको नियमित र अनुशासित दिनचर्यामा अभ्यस्त गराउनु हो । निरोगी र तन्दुरुस्त राख्नका लागि आवश्यक पहल गर्नु हो । खुसीको माध्याम पहिल्याउनु हो । यसका अनेक माध्याम हुनसक्छ । हाम्रो दिनचर्या नियाल्ने हो भने, हामीले आफु स्वंमलाई भने बिर्सिरहेका हुन्छौं । हाम्रो दिमागमा त केवल करियर, पैसा, घरपरिवार, आफन्त, सफलता आदि कुरा घुमिरहेको हुन्छ । अरु नै कुरामा हामी हराइरहेका हुन्छौं, आफैलाई बिर्सिएर ।
हामी आफैतर्फ फर्कौं । बिहान उठेदेखि राती सुत्नेबेलासम्म हामी अरुकै निम्ति खटिन्छौ । आफ्नो लागि भने हामी समय दिदैनौ । बिहान एक छिन शारीरिक व्यायाम गर्नु पर्‍यो भने हामीलाई फुर्सद हुँदैन । दिउँसो अलि आरमसाथ बसेर खानुपर्‍यो भने हामीलाई समय पुग्दैन । एकछिन ध्यान वा प्राणायाम गर्नुपर्‍यो भने हामीलाई मौका मिल्दैन । अर्थात हामीलाई आफ्नो लागि प्रेम गर्ने समय छैन ।
हामी आफैलाई किन प्रेम गर्दैनौं ? हामी किन आफ्नैलागि समय दिदैनौ ? हामी आफैसँग किन मित्रता गर्दैनौ ? किनभने, हामी बाह्य सुख खोजिरहेका छौं । जबकी हामी आफै ठिक छैनौ भने बाहिरी सुखले केही गर्दैन । त्यसैले हामीले आफु स्वंमलाई माया गर्नुपर्छ । हामी आफ्नै लागि पनि समय दिनुपर्छ । आफुले आफुलाई कसरी खुसी राख्ने भन्ने कुरामा पनि घोत्लिनुपर्छ ।
१. मस्त सुतौं
हामी आफ्नो शरीरलाई माया गर्छौ भने, यसलाई धपेडीमा मात्र नराखौं । उचित समयमा विश्राम पनि दिनुपर्छ । प्रकृतिले शारीरिक विश्रामको लागि निश्चित समय दिएको छ । रातको समयमा हाम्रो शरीरले विश्राम खोज्छ । यसबेला हामी मस्त निदाउनु आवश्यक छ । कम्तिमा ७ घण्टा निदाउनु जरुरी छ । जब गहिरो निन्द्रा लिइन्छ, हाम्रो स्फूर्ति बढ्छ । शरीर चंगा हुन्छ ।
हामीलाई करियर बनाउन, पैसा कमाउन, साथीभाईसँग गफ गर्ने समय हुन्छ । तर, शरीरलाई चुस्त राख्न व्यायाम गर्ने समय हुँदैन । दिनभरको केहि समय हामी व्यायामको लागि निर्धारित गरौं । खासगरी बिहान एक-दुई घण्टा व्यायाम गरौं । शारीरिक व्यायाम, योगा, प्राणायाम गरौं । यसले शरीरलाई फुर्तिलो राख्छ । दिनभर काम गर्ने उर्जा दिन्छ । हामी थप स्फूर्तिका साथ बाँकी काम गर्न सक्छौं ।
३. ब्रेकफास्ट लिने गरौं
ब्रेकफास्ट अर्थात विहानको नास्ता लिनुपर्छ, आफ्नो शरीरलाई माया गर्ने हो भने । ब्रेकफास्टले दिनभरको लागि हाम्रो शरीरलाई उर्जा प्रदान गर्छ । नास्ता पोषिलो एवं स्वस्थ्यबर्द्धक हुनुपर्छ । बिहान उठेर सौच क्रिया एवं व्यायाम गरिसकेपछिको समयमा नास्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
४. आफ्नो सरसफाईमा ध्यान दिने
आफुलाई सफा राख्न नियमित रुपले नुहाउने गरौं । संभव भएसम्म हरेक बिहान नुहाउनुपर्छ । नुहाउँदा शरीर सफा हुन्छ । ताजा महसुष गरिन्छ । साथसाथै यसले रक्त संचारमा पनि प्रभावकारी काम गर्छ । शरीरमा भएको ब्याक्टेरियाहरु नष्ट हुन्छ । नुहाउनुको धेरै फाइदा छन् । आफ्नो शरीरलाई माया गर्ने हो भने नुहाउनुपर्छ ।
५. खुसी रहन सिकौं
खुसी र दुख हाम्रो मनभित्र छ । अन्त जान पर्दैन । खुसी रहनु भनेको स्वस्थ्य जीवनशैली व्यतित गर्नु पनि हो । जब हामी खुसी हुन्छौं, शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता पनि बढ्छ ।
६. आफैलाई हानी गर्ने कुरा त्यागौं
हामी क्षणिक स्वादको लागि चुरोट तान्छौं, मदिरा पिउँछौं । सूर्ति, गुट्खा चपाउँछौं । मसलेदार खानेकुरा खान्छौं । जबकी यस्ता खानेकुराले हाम्रो शरीरलाई हानी गर्छ । हानी गर्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि हामी यस्ता खानेकुरा सेवन गरिरहेका हुन्छ । यस्ता खानेकुरा त्याग्नुपर्छ । खानपानको कुरा मात्र होइन, हाम्रो कतिपय खराब बानी व्यवहार पनि त्याग्नुपर्छ । जस्तो कि, निस्क्रिय रहने, एकै स्थानमा लामो समय बस्ने आदि ।
← यी हुन् यौन सम्पर्क हुँदा युवतीले चाहने १० कुराहरु
मानिस किन घुर्छ ? →
अप्रील 4, 2015 जनवरी 30, 2017 साइन्स इन्फोटेक